Xinhua Myanmar - ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်း ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနောက် ပုံမှန်ဘဝနေထိုင်မှုအသစ်ထဲ ဝင်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာ
ဘရူနိုင်း ကိုဗစ်တိုက်ဖျက်ရေး အသစ်ပုံမှန်ဘဝ
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆာရီဘီဂါဝန်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၃၅ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ချီတက်နေသူများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ပြည်တွင်းကူးစက်မှု အတည်ပြုလူနာ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ ရက်ပေါင်း ၃၀၀ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံအတွင်း ကပ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။ ယခုအခြေအနေအတိုင်းဆိုပါက မတ်လ ၈ ရက်မှစတင်ကာ လူမှုဘဝခပ်ခွာခွာနေထိုင်းရေး ကန့်သတ်ချက်များကို ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြင့် အပြောင်းအလဲများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
ဗလီများ ၊ ကျောင်းများ ၊ ပြတိုက်များ ၊ အားကစားရုံများ ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ နှင့် ဈေးဆိုင်များကို ပုံမှန်ဘဝနေထိုင်မှုအသစ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခြင်း အပါအဝင် အပြောင်းအလဲ များကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ထို့ပြင် လူစုလူဝေး ပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားများကို လူပေါင်း ၃၅၀ ဦး ခွင့်ပြုထားရာမှ လူပေါင်း ၁,၀၀၀ ဦးအထိ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရန် တိုးချဲ့ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းရယူခြင်း(QR codes) ကို နေရာတိုင်းတွင်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မကြာခဏလက်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ဆေးရည်များ အသုံးပြုခြင်း နှင့် လူထူထပ်သော နေရာများတွင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ဆင်ခြင်း ကဲ့သို့သော တစ်ကိုယ်ရေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များကို အစဉ်တစ်စိုက်လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ကဆိုသည်။
နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါ တစ်ကြော့ပြန် မဖြစ်ပွားစေရန် ဖြစ်နိုင်သမျှ ထိန်းချုပ်မှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ကန့်သတ်ထားသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာမှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
နိုင်ငံတွင်း ၊ ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်များတွင် ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို လျှော့ချပေးနိုင်ရန်အတွက် ကူးစက်မှုအန္တရာယ် အခြေအနေကို ဆက်လက်ထိန်းချုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနကဆိုသည်။
“ အကယ်၍ ကပ်ရောဂါအခြေအနေက စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ပြန်လုပ်သွားမှာပါ။ လူမှုဘဝခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်း ကန့်သတ်ချက်တွေပြန်ထားသွားဖို့လည်း တွန့်ဆုတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး ” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် မတ် ၆ ရက်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှ ဝင်ရောက်လာရောက်သူတစ်ဦးထံမှ COVID-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံအတွင်း အတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း ၁၈၉ ဦးထိ ရှိလာခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးရှိကြောင်း နှင့် ရောဂါသက်သာပျောက်ကင်း၍ ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသူပေါင်း ၁၈၂ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BANDAR SERI BEGAWAN, March6(Xinhua) -- Brunei on Saturday announced further reduction of social distancing measures and implementation of New Normal for major social activities including mass gathering starting from March 8.
Brunei's Ministry of Health said that the COVID-19 pandemic in Brunei is currently under control as the last case of local infection was reported over 300 days ago. Taking into account this situation, the Ministry of Health announced more changes in the reduction of the social distancing measures, which will commence on March 8.
The changes include the implementation of New Normal for activities in places such as mosques, schools, museums, sports facilities, restaurants, cinemas, stalls and markets. Mass gathering limitation will also be expanded from 350 people to 1,000 people.
The health ministry reminded the public to scan health QR codes at all premises and always practice personal hygiene such as washing hands regularly or using hand sanitizer, and usingaface mask when inacrowded area.
According to the health ministry, the changes are for activities carried out within the country only by maintaining the current cross-border travel restrictions to strictly control the possibility of re-occurrence of COVID-19 infection in the country.
The ministry also said that it will continue to monitor the situation of the outbreak at national, regional and global levels, and carry out ongoing risk assessments to consider further de-escalation measures.
"If the epidemic situation becomesaconcern, the Ministry of Health will not hesitate to reinforce the social distancing measures that need to be implemented to control the epidemic."
Brunei reported one new imported case of COVID-19 from Jakarta, Indonesia on Saturday, bringing the national tally to 189.
There have been three deaths resulted from COVID-19 in Brunei and 182 patients have recovered. Enditem
People from different Bruneian communities take part in the 35th National Day celebration in Bandar Seri Begawan, capital of Brunei, Feb. 23, 2019. Brunei held massive parade and performances in the capital on Saturday to mark its 35th National Day. (Xinhua/Jeffrey Wong)
Previous Article ဆော်ဒီဦးဆောင်သည့် ညွန့်ပေါင်းတပ်အဖွဲ့ က ယီမင်နိုင်ငံ ဟူတီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စခန်းအား လေကြောင်းတိုက်ခိုက်
Next Article သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ လေကြောင်းပြပွဲ အကြိုစမ်းသပ်ပျံသန်းမှုတွင် စစ်ဖက်ရဟတ်ယာဉ်များ စွမ်းရည်ပြသ